ထိတ်လန့်သည်းဖိုရုပ်ရှင်တွေကြည့်တာဟာ သင့်ကိုဝိတ်ကျစေနိုင်တယ်ဆိုတာ သိပါသလား? – Trend.com.mm
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၀ိတ်ချနည်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနက် သင့်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့ကူညီပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်မျိုးကို သင်အခုချိန်ထိ သိသေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။အစားအသောက်နဲ့ဝိတ်ချတာလည်းမဟုတ် လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ဝိတ်လျှော့တာလည်းမဟုတ်တဲ့ ဘယ်လိုနည်းလမ်းက သင့်ကို ၀ိတ်ချဖို့ အကူအညီဖြစ်စေမှာလဲ?
Westminster တက္ကသိုလ်က သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာချက်အရ မိနစ် ၉၀ ကြာမြင့်တဲ့ Horror ရုပ်ရှင်ကားတွေဟာ ၁၁၃ ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းသွားစေတယ်လို့သိရပါတယ်။နာရီဝက်လမ်းလျှောက်မှ၊ ၁၅မိနစ်နီးပါး ပြေးမှ လောင်ကျွမ်းမယ့်ကယ်လိုရီပမာဏာနဲ့ Horror ကား
တစ်ကားထိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ လောင်ကျွမ်းသွားမယ့်ကယ်လိုရီက တူညီနေတာပါပဲ။
ထိတ်လန့်စရာရုပ်ရှင်ကားတွေကြည့်နေချိန်ဆို နှလုံးခုန်နှုန်း၊အသက်ရှုသွင်းနှုန်း၊အသက်ရှုထုတ်နှုန်းတွေဟာ မြန်ဆန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာကိုယ်ကြည့်နေတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအလိုက် ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံမှန် Horror ဇာတ်ကားဟာ ၁၁၃ ကယ်လိုရီ
လောင်ကျွမ်းပြီး The Shining ဇာတ်ကားဟာ ၁၈၄ ကယ်လိုရီ ၊ Jaws ဇာတ်ကားကြည့်ရင် ၁၆၁ ကယ်လိုရီ ၊ The Exorcist ဇာတ်ကားကြည့်ရင် ၁၅၈ ကယ်လိုရီ ပိုမိုလောင်ကျွမ်းတယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဇာတ်ကားသုံးကားဟာတော့ သင့်ကို နှလုံးခုန်နှုန်းပိုမြန်စေပြီး Adrenaline
လုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေလို့ ကယ်လိုရီများစွာလောင်ကျွမ်းစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဇာတ်ကားတွေဟာ သင့်အတွက် အရမ်းကြောက်စရာကောင်းနေတယ်ဆိုရင် Paranormal Activity (111 kcal) ၊The Blair Witch Project (105 kcal) ၊ The Texas Chain Saw Massacre (107 kcal) စတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Horror movie ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ၀ိတ်လည်းကျ ရုပ်ရှင်လည်းကြည့်ရစေမယ့်အကွက်ပါပဲ။လေ့လာသူပညာရှင်တွေ ထပ်အကြံပေးထားတာကတော့ ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိစေချင်ရင် သရေစာတွေ၊ချောကလက်တွေ၊ပေါက်ပေါက်ဆုပ်တွေ၊ဆိုဒါအချိုရည်တွေ အနားမှာ မျိုးစုံယူမထားဖို့ပါပဲ။ပြီးတော့ မျက်လုံးကို တစ်ချိန်လုံးပိတ်မထားပါနဲ့တဲ့! ( Horror Movie မကြိုက်ဘူး ကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းကို လိုက်မလုပ်သင့်ပါဘူးနော်)
ကမ်ဘာပျေါမှာ ဝိတျခနြညျးအမြိုးမြိုးရှိတဲ့အနကျ သငျ့ကိုယျအလေးခြိနျလြှော့ခဖြို့ကူညီပေးနိုငျတဲ့ နညျးလမျးတဈမြိုးကို သငျအခုခြိနျထိ သိသေးမှာမဟုတျပါဘူး။အစားအသောကျနဲ့ဝိတျခတြာလညျးမဟုတျ လကေ့ငျြ့ခနျးနဲ့ဝိတျလြှော့တာလညျးမဟုတျတဲ့ ဘယျလိုနညျးလမျးက သငျ့ကို ဝိတျခဖြို့ အကူအညီဖွဈစမှောလဲ?
Westminster တက်ကသိုလျက သိပ်ပံပညာရှငျတှရေဲ့လလေ့ာခကျြအရ မိနဈ ၉၀ ကွာမွငျ့တဲ့ Horror ရုပျရှငျကားတှဟော ၁၁၃ ကယျလိုရီလောငျကြှမျးသှားစတေယျလို့သိရပါတယျ။နာရီဝကျလမျးလြှောကျမှ၊ ၁၅မိနဈနီးပါး ပွေးမှ လောငျကြှမျးမယျ့ကယျလိုရီပမာဏာနဲ့ Horror ကား
တဈကားထိုငျကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ လောငျကြှမျးသှားမယျ့ကယျလိုရီက တူညီနတောပါပဲ။
ထိတျလနျ့စရာရုပျရှငျကားတှကွေညျ့နခြေိနျဆို နှလုံးခုနျနှုနျး၊အသကျရှုသှငျးနှုနျး၊အသကျရှုထုတျနှုနျးတှဟော မွနျဆနျလာပါတယျ။အဲ့ဒီအခြိနျအတှငျးမှာကိုယျကွညျ့နတေဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားအလိုကျ ကယျလိုရီလောငျကြှမျးလာတယျလို့သိရပါတယျ။ပုံမှနျ Horror ဇာတျကားဟာ ၁၁၃ ကယျလိုရီ
လောငျကြှမျးပွီး The Shining ဇာတျကားဟာ ၁၈၄ ကယျလိုရီ ၊ Jaws ဇာတျကားကွညျ့ရငျ ၁၆၁ ကယျလိုရီ ၊ The Exorcist ဇာတျကားကွညျ့ရငျ ၁၅၈ ကယျလိုရီ ပိုမိုလောငျကြှမျးတယျလို့ တှရှေိ့ခဲ့ရပါတယျ။အဲ့ဒီဇာတျကားသုံးကားဟာတော့ သငျ့ကို နှလုံးခုနျနှုနျးမွနျစပွေီး Adrenaline
လုပျဆောငျမှုကိုပိုမိုမွနျဆနျစလေို့ ကယျလိုရီမြားစှာလောငျကြှမျးစတောပဲဖွဈပါတယျ။အဲ့ဒီဇာတျကားတှဟော သငျ့အတှကျ အရမျးကွောကျစရာကောငျးနတေယျဆိုရငျ Paranormal Activity (111 kcal) ၊The Blair Witch Project (105 kcal) ၊ The Texas Chain Saw Massacre (107 kcal) စတဲ့ ဇာတျကားတှကွေညျ့နိုငျပါတယျ။
Horror movie ကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျကတော့ ဝိတျလညျးကြ ရုပျရှငျလညျးကွညျ့ရစမေယျ့အကှကျပါပဲ။လလေ့ာသူပညာရှငျတှေ ထပျအကွံပေးထားတာကတော့ ပိုပွီးထိရောကျမှုရှိစခေငျြရငျ သရစောတှေ၊ခြောကလကျတှေ၊ပေါကျပေါကျဆုပျတှေ၊ဆိုဒါအခြိုရညျတှေ အနားမှာ မြိုးစုံယူမထားဖို့ပါပဲ။ပွီးတော့ မကျြလုံးကို တဈခြိနျလုံးပိတျမထားပါနဲ့တဲ့! ( Horror Movie မကွိုကျဘူး ကွောကျတယျဆိုရငျတော့ ဒီနညျးလမျးကို လိုကျမလုပျသငျ့ပါဘူးနျော)